iOS4MANUAL cracked application install မြန်မာလိုရေးထားသည် [Tutorial]
Myanmar IT Resource Forum » MOBILE & GAMERS ZONE » » Mobile Zone » iOS4MANUAL cracked application install မြန်မာလိုရေးထားသည် [Tutorial]
1 iOS4MANUAL cracked application install မြန်မာလိုရေးထားသည် [Tutorial] on 6th August 2010, 11:34 pm
ကဲ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တစ်ဆင့်ချင်းသာလုပ်ဗျာ။ iOS 4.0.1 ကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်။
လုပ်ကြည့်ဖို့ ရှိရင် ဒီ post ကို အစ၊အဆုံး အရင်ပြီးအောင်ဖတ်စေလိုပါသည်။
၁။ အရင်ဆုံးသင့် iOS4 ကို jailbreak လုပ်ပါ။ jailbreak လုပ်ပုံလုပ်နည်း တင်ပေးထာပြီးသားပါ။
၂။ သင့်ဖုန်း jailbreak လုပ်တာအောင်မြင်ရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ home screen မှာ cydia ဆိုတဲ့ software လေးပေါ်လာမှာပါ။ jailbreak လုပ်ပြီးရင်ဖုန်းကို pc နဲ့ synchronize လုပ်ပေးပါအုံး။ (မိမိ pc တွင် itune software install လုပ်ထားရန်လိုသည်။)
၃။ အဲ့ဒီ cydia software လေးကို run လိုက်ပါ။ ( wifi internet access လိုသည်။ )
၄။ manage ထဲက source ကိုသွားပါ။ edit ကို နှိပ်ပါ။ add ကိုနှိပ်ပြီး အောက်ပါ link ကို add လုပ်ပါ။
add source ကိုနှိပ်ပါ။
၅။ ဘာစာတွေပေါ်ပေါ် add anyway ပါပဲ။
၆။ cydia က source ကို update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ ပြီးရင် search ထဲမှာ AppSync for OS 4.0 ကို search လုပ်ပါ။ (cydia software ထဲဝင်ထားရင်ညာဘက်ထောင့်အောက်မှာ search ပုံလေးရှိပါတယ်။)
၈။ ရှာပြီးရင် AppSync for iOS 4.0 ကို install လုပ်ပါ။
ကဲဒါဆို crack application တွေသွင်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
ကဲဘယ်လိုသွင်းမလဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။ ( How to install cracked .ipa file )
iphone ipod application များ၏ extension သည် .ipa ဖြစ်သည်။
- ကဲapplication တွေကို အောက်မှာပေးထားတဲ့ website မှာသွားဒေါင်းပါ။ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ register လုပ်ပြီး log in လုပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ free ပါ။
- အဲနေအုံး iphone ပေါ်ကနေဒေါင်းစရာလိုဘူးနော်။ internet access ရတဲ့ computer ပေါ်မှာတင်ဒေါင်းရတယ်။
- zip file လေးနဲ့ရလိမ့်မယ်။ ဖြည်လိုက်။ .ipa file လေးထွက်လာလိမ့်မယ်။
- အဲ့ဒီ .ipa file လေးကိုမိမိ iphone လေးထဲသွင်းရမှာနော်။ ကဲသွင်းကြည့်ရအောင်။
၁။ ဖုန်းကို pc နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။
၂။ itune ပွင့်လာမှာပေါ့။ မပွင့်လာရင်လဲ ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့။
၃။ မိမိ install လုပ်ချင်သော .ipa file လေးကို double click နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။
၄။ ဒါဆို itune ထဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ synchronise လုပ်လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ application လေး ဖုန်းထဲဝင်သွားပါပြီ။
၆။ ready to launch your application or game in your iphone.
- jailbreak လိုပါတယ်။ jailbreak လုပ်ပါ။
- cracked application သွင်းဖို့အတွက် application synchronise (AppSync 4.0)ဆိုတဲ့ software လေးဖုန်းထဲမှာသွင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ တခြား version ရှိပါတယ်။ iOS4 ဖြစ်တဲ့အတွက် version4ကိုသွင်းပေးရပါမယ်။ cydia ထဲသွားသွင်းရပါမယ်။ source ကတော့ cydia.hackulo.us ပါ။
- jailbreak, app sync ver4သွင်းပြီးပြီ။ ဒါဆို မိမိ iphone လေးက cracked application ကိုလက်ခံဖို့ အသင့်ပါပဲ။
- မိမိဒေါင်းထားသော .ipa application များကို double click လုပ်ပြီး itune နဲ့ synchronize လိုက်ရင် အားလုံး ready ပါပဲ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီးမှ ဒီ post ကိုတင်တာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ game လေးတွေ သွင်းထားပါတယ်။
- Real Racings
- Red Bull AR
အားလုံး [You must be registered and logged in to see this link.] မှာရှိပါတယ်။